မောက်တင်ရေဝမ်းဘဲကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
Call ofaGreat Crested Grebe recorded in Surrey
Range of P. cristatus
Breeding Resident Non-breeding
မောက်တင် ရေဝမ်းဘဲ (Podiceps cristatus) သည် ရေနေငှက် သတ္တဝါ တစ်မျိုးဖြစ်ြပီး Grebe ခေါ် အရွယ်လတ် ငှက်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းငှက်၏ သိပ္ပံအမည်မှာ Podiceps cristatus ဖြစ်သည်။ ယင်းငှက်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ၄၆ စင်တီမီတာမှ ၅၁ စင်တီမီတာခန့် ရှည်လျားကြသည်။ တောင်ပံနှစ်ခုပေါင်း မှာ ၅၉ စင်တီမီတာမှ ၇၃ စင်တီမီတာခန့်ထိ ရှည်လျားကြသည်။ အဖြူရောင်နှင့် အညိုရောင် ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပြီး လိမ္မော်ရောင် အမောက်ကလေးများကို ဦးခေါင်ထိပ်တွင် တွေ့ရသည်။ ရှည်လျားပြီး ချွန်ထက်သည့် နှုတ်သီးကလေးများရှိသည်။ မောက်တင် ရေဝမ်းဘဲ သားပေါက်ဘဝတွင် အဖြူရောင်နှင် အမည်းရောင် အစင်းကြောင်းကလေးများဖြင့် တန်ဆာဆင်ထားပြီး မြင်းကျား၏အစင်းကြား သဏ္ဌာန်နှင့် ဆင်တူလေသည်။
Juvenile Great Crested Grebe with adult
မောက်တင်ရေဝမ်းဘဲကြီးများကို ဥရောပတိုက်၊ အာရှတိုက်၊ အာဖရိကနှင့် ဩစတျေးလျ တိုက်များတွက် တွေ့ရတတ်သည်။ ဥရောပတိုက်တွင် ရှိသော မောက်တင် ရေဝမ်းဘဲသည် အကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းရေဝမ်းဘဲများသည် သန့်ရှင်းသော ရေကန်များတွင်သာ နေထိုင်ကြပြီး ကဏန်း၊ ရေနေ သတ္တဝါငယ်ကလေးများ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်များနှင့် ဖားငယ်ကလေးများကို စားသောက်တတ်သည်။ အစာရှာဖွေရာတွင် ရေငုပ်၍ ရှာဖွေတတ်သည်။
မောက်တင် ရေဝမ်းဘဲများတွင် မျိုးပွားရာတွင် အလွန်ထူးခြားသော စရိုက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းမှာ ရေဝမ်းဘဲ အဖိုနှင့် အမနှစ်ဦးစလုံး မိတ်မလိုက်မီ ရေထဲတွင် က ခြင်းပင် ဖြစ်စသည်။ မောက်တင်ရေဝမ်းဘဲများသည် အဖိုအမ တွေ့သည့်အခါတိုင်း အတူ က လေ့ရှိပြီး က နည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ကတတ်ကြသည်။ ဖြစ်စဉ်များအရ မိတ်လိုက်ပြီး အသိုက်အမြုံသို့ ပြန်ရာတွင်ကာ မတူချေ။ ကခြင်းအပြီးတွင် ဦးခေါင်းကိုလှုပ်ရမ်းကာ အဆုံးသတ်လေ့ရှိသည်။
ယင်းတို့သည် အသိုက်အမြုံကို အပင်များဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ၎င်းအသိုက်များသည် ရေပေါ်တွင် ပေါလောပေါ်နေတတ်သည်။ မောက်တင်ဝမ်းဘဲ အဖိုအမ တစ်စုံတွင် ဥနှစ်လုံးခန့် ဥလေ့ရှိသည်။ ယင်းဥကလေးများမှ သားပေါက်လာသော် ထို ငှက်ငယ်ကလေးများသည် ရေမကူးတတ်ချေ။ ၎င်း၏ မိဖတို့ သင်ပေးမှသာ ရေကူးတတ်၊ ရေငုပ်တတ်လေသည်။ တခါတရံ မိဖများရေကူးသည့်အခါ ငှက်ငယ်ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ မိဖများ ကျောပေါ်တွင် နေလေ့ရှိသည်။
၁၉ ရာစုနှစ်တွင် ယင်းငှက်များ၏ လိမ္မော်ရောင်အမွေးများအား ဦးထုတ်၊ အင်္ကျီ စသည့် လူအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးချရန်အတွက် ဖမ်းဆီးပစ်ခတ်မှူများကြောင့် ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းရှိ မောင်တင် ရေဝမ်းဘဲ ငှက်မျိုးတို့ မျိုးတုံးလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗြိတိသျှ တော်ဝင်အဖွဲ့အစည်းတို့မှ တားမြစ်မှူများ ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယနေ့တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် မောက်တင်ရေဝမ်းဘဲများစွာကို တွေ့ရလေသည်။
↑ BirdLife International (2012). "Podiceps cristatus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောက်တင်ရေဝမ်းဘဲကြီး&oldid=709942" မှ ရယူရန်
အိုရှန်းနီးယားတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
အာဖရိကတိုက်တွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ယူရေးရှားတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။